दुखद : यी अभागी बाबु! जवान छोरीलाई कालले लग्यो, बचाउन खोज्दा आफैं पुगे यस्तो अवस्थामा – नेपाली सूर्य
दुखद : यी अभागी बाबु! जवान छोरीलाई कालले लग्यो, बचाउन खोज्दा आफैं पुगे यस्तो अवस्थामा
October 19, 2020 Nepali SuryaLeaveaComment on दुखद : यी अभागी बाबु! जवान छोरीलाई कालले लग्यो, बचाउन खोज्दा आफैं पुगे यस्तो अवस्थामा
काठमाण्डौं । कहिलेकाँही जीवनमा यस्ता घटना घट्छन् जुन न म बिर्सन् सकिन्छ न त दुखबाट पार पाउन सकिन्छ । दाङका ५९ वर्षीय बुद्धिराम कुमाललाई अहिले यस्तै भएको छ । एकछिन सम्म साथै रहेकी उनकी छोरीलाई कालले लगेको छ । उनी पनि यस्तो अवस्थामा पुगेका छन्, न त बोल्न सक्छन् त न हाँस्न न त रुन नै ।
उनी छोरीलाई साइकलमा पछाडि राखेर कतै जाँदै थिए । अनि एक टिप्पर काल बनेर आयो । त्यसपछि साईकलमा सवार बाबुछोरीलाई टिप्परले ठ’क्क’र दिदा छोरीको तत्कालै ज्यान गएको छ भने अर्का कुमाल भएका छन् ।
यो घटना आइतबार दाङ र अर्घाखाँचीको सीमाना नजिकै भएको थियो । साईकलको पछाडी बसेकी कुमालकी २४ वर्षिया छोरी जमुनाले पानी समेत भन्न पाइनन् । उनीहरुको घर गढवा गाउँपालिका वडा नम्बर १ जुराउनी रहेको बुझिएको छ ।
आफै सुरमा सडकमा गइरहेका कुमाल र उनकी छोरी जमुना सवार साइकललाई आइतबार दिउँसो एकबजे पश्चिमबाट पूर्वबाट तर्फ जादै गरेको रा १ त २०२१ नम्बरको टिपरले हा’ने’को थियो ।
दुर्घटनामा गम्भीर घाइते जमुनाको उपचारका लागि लमहीतर्फ ल्याउदै गर्दा बाटोमै ज्यान गएको ट्राफिक प्रहरी कार्यालय भालुवाङले जनाएको छ । घाइते कुमाललाई बुटवल रिफर गरिएको छ भने जमुनाको शवलाई स्वास्थ्य चौकी लालमटियामा राखिएको छ । तस्वीर: सामाजिक सञ्जालबाट साभार
आज सोमबार यसाे गर्नुहोस्, तपाईंको भाग्य चम्किन्छ, पैसा आउँछ
मोटरसाइकलले ठक्कर दिँदा घाइते भएका बालक मृत्युसंग लडिरहे, तर महिना पुगेकै दिन प्राण त्यागे !
दु:खद खबर: चार दिनको छोरा छाडेर, बिदा भइन ३० वर्षीया सुत्केरी डम्बरीदेवी
November 14, 2020 Nepali Surya
‘आयुर्वेदिक औषधीले कोरोना निको पार्छ, खोपमा अर्बौं खर्च गर्नुपर्दैन’ : अध्यक्ष शिवलाल
December 3, 2020 December 3, 2020 Nepali Surya
घान्द्रुकमा जीप दुर्घटना हुँदा चालकसहित ८ जनाको मृत्यु, एकजना भीरमा अड्किएर बाँच्न सफल
October 11, 2021 October 11, 2021 Nepali Surya